Raadi - kani ma keto baa?
Kani ma keto baa?
Dhammaan macluumaadka in
waxaad u baahan tahay cuntada keto
Horay loo kariyey
Maraqa iyo maraqa
© 2022 Kani ma keto baa?
Ama raadi iyaga iyada oo loo marayo qaybahayaga.
Hadda miyaad bilowday cuntada keto oo ma garanaysaa meel aad ka bilowdo?
Ka bilow fiidiyowyadan:
Waa maxay cuntada keto ama cuntada ketogenic?
9 tabo oo aasaasi ah oo lagu bilaabayo cuntada keto.
Waxaad ku ballaarin kartaa nuxurka fiidiyowyadan maqaalladayada:
Cuntada Keto: Hagaha ugu dambeeya ee Cunto Ketogenic Kaarboon-hoose.
9 Talooyin Keto ah oo lama huraan u ah bilowgayaasha.
Maqaalladii ugu dambeeyay oo lagu daray
Miraha Keto: Hagaha ugu dambeeya
Haddii aad in muddo ah ku jirtay cuntada keto, waxa laga yaabaa in aad ka maqan tahay miro. Dad badan ayaa aaminsan in tan iyo markii…
5 Sababood Oo Sabab U Ah Estrogen-ka Iyo Sida Loo Bedelo
Isbeddellada hormoonnada way adag tahay in la ogaado. Calaamaduhu inta badan waa kuwo aan fiicneyn, sida daal ama niyadda oo beddesha, oo badiyaa waxay isku beddelaan wareeggaaga...
Kombucha on Keto: Ma fikrad fiican baa mise waa in laga fogaado?
Aan qiyaaso. Waxaad ku aragtay kombucha dukaanka xaafaddaada saaxiibkaa ma joojin doono ka hadalka. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa tijaabisay. Oo hadda waxaad leedahay…
Keto Wines: Hagaha ugu dambeeya ee Khamriyada Kaarboon-hoosaadka ugu Fiican
Mid ka mid ah su'aalaha ugu waaweyn ee dadka badankooda ay weydiiyaan marka ay bilaabayaan cunto-carbeedka-yar ama keto-ga waa: Miyaad…
Keto iyo Rooda: Cuntada Keto ma caawin kartaa Calaamadaha Ridada?
Haddii aad cuntid hilibka, kalluunka, ama hilibka xubnaha jirka, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto: Cuntooyinkan keto-saaxiibtinimo ma kordhiyaan khatarta ah inuu kugu dhaco cudurka gout? Intaa ka dib, xikmad...
Keto miyuu Dhaqdhaqaaqa Dhuxusha? Sideebuu u shaqeeyaa kabitaankan?
Dad badan ayaa ku faraxsan kaarboonka firfircoon. Kaabistan ayaa la sheegay inay ka caawinayso sun-saarista, caafimaadka mindhicirka, caddaynta ilkaha, iyo wax ka badan. Kuwaas…
Intee in le'eg ayay qaadataa in la galo ketosis?
"Miyaanan weli ku jirin ketosis?" Waa su'aal caadi ah oo ka dhex jirta keto dieter. Waqtiga lagu galo ketosis waxay kuxirantahay jadwalkaaga…
Subaga Ghee (Subag La Cadeeyay): Cunno badan oo run ah mise wadarta beenta ah?
Ghee, oo sidoo kale loo yaqaan subagga la caddeeyey, ayaa qarniyo badan ahayd cunnada cunnada ee Hindida. Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah daawada…
Cunnadii ugu dambeeyay ee lagu daray
Wanaagsan ee Keto Green Smoothie Recipe
Dad badan ayaa u maleynaya in raacitaanka cuntada ketogenic ay ka dhigan tahay in maalintaada ay ka buuxaan hilib, farmaajo, iyo subag. Laakiin tani ma noqon karto wax intaa ka badan ...
4 Walaxda Cuntada Kaarboon-yar ee Daruuraha
Ma jeclaan lahayd inaad cunto cunto badan? Ha werwerin, keligaa ma tihid. Sababtoo ah cuntada ketogenic macnaheedu waa cunista karbohaydraytyo yar, waa ...
20 Daqiiqo Keto Cuntada Madoobaatay ee Digaagga
Cuntooyinka digaaga ee madow waxaa guud ahaan lagu sameeyaa xawaash madow oo ay ku jiraan sonkor iyo yaa yaqaan wax kale. Noocan keto...
Cuntada Keto iyo Kaarboodhka Hoose ee Velvety Pumpkin Pie Recipe
Marka ciidaha ay soo dhawaadaan, waxaa laga yaabaa inay ku weydiiyaan keto macmacaan aad samayn karto si aad uga qayb qaadato shirarka mustaqbalka. Nasiib wanaag, tani...
Velvet-ka Cas ee Carb Low, Keto, iyo Donuts-Free Recipe ee Maalinta Jacaylka
Ma la gaadhay waqtigii aad wax ugu dabbaal degi lahayd jacaylkaaga? Haddii Valentine's Day ama sannad-guurada ama dabaaldeg weyn yimaado, waxaad diyaarin kartaa xoogaa ...
18 Cuntooyinka Quraacda aan Ukunlaha lahayn
Ma u malaynaysaa in quraacda keto la'aanteed ay suurtagal tahay? Ukuntu waa qayb ka mid ah cuntada ketogenic. Iyadoo 5 garaam oo baruur ah, 6 garaam ...
Cunista Kukiyada Gingerbread ee Ketogenic-ka-free ee Christmas-ka
Marka xilliga fasaxa uu soo wareego, uma baahnid inaad seegto buskudka kirismaska ​​aad jeceshahay kaliya sababtoo ah waxaad ku jirtaa cunto karbohaydh yar leh. ...
Keto Chicken Tikka Masala Recipe 30 daqiiqo gudahood
Chicken tikka masala waa mid ka mid ah cuntooyinka Hindida ugu caansan Galbeedka. Cuntada caadiga ah waxaa lagu bixiyaa bariis iyo rooti naan ah oo lagu ...
Cuntooyinka lagu daray ee u dambeeyay
Keto miyuu yahay Arrowroot?
Jawaab: Arrowroot gabi ahaanba ma aha keto sababtoo ah heerka sare ee karbohaydraytyada. Arrowroot ama rootiga falaarta waxaa laga soosaaraa geed kulaylaha ah oo lagu magacaabo Maranta Arundinacea. Geedkan waxaa asal ahaan laga helay...
Keto Tapioca miyaa?
Jawaab: Tapioca ma aha keto. Maadaama ay leedahay maaddo karbohaydrayt oo aad u saraysa. Aad u sarreeya, xitaa qayb yar ayaa kaa saari kara ketosis. The…
Keto La Yuca miyaa?
Jawaab: Cassava maaha keto saaxiibtinimo. Nasiib darro, waxay leedahay karbohaydraytyo aad u badan. Sida khudaarta intooda badan ee ka baxa dhulka hoostiisa. Cassava waa in laga fogaadaa keto…
Keto ma galleyda baa mise waa galleyda?
Jawaab: Burka galleyda, oo sidoo kale loo yaqaano galleyda, ma aha keto mana ansaxayo beddelka burka sarreenka ee cuntada keto tan iyo…
Ma keto qumbaha?
Jawaab: Ka kooban qiyaastii 2,8g oo karbohaydrayt ah qumbaha dhexdhexaadka ah, qumbaha waa miro aad ku raaxaysan karto keto adiga oo aan si xad dhaaf ah u samayn…
Sonkorta qumbaha ma keto baa?
Jawaab: Sonkorta qumbaha ama sokorta timirta qumbaha ayaa dad badani u qiimeeyaan inay yihiin sonkor ka caafimaad badan. Laakiin ma aha wax keto ah maadaama ay ka kooban tahay…
Ma macaaneeyaha tagatose ma keto?
Jawaab: Haa. Tagatose waa macaaneeye leh tusaha glycemic ee 0 kaas oo aan kor u qaadin heerka sonkorta dhiiggaaga taas oo ka dhigaysa keto ku habboon. Tagatose-ka...
ma kurmeer baa keto ah?
Jawaab: Turmeric wuxuu helay caan ka mid ah adduunka keto, iyo sabab wanaagsan! In kasta oo ay leeyihiin xoogaa karbohaydrayt ah, waxay la yimaadaan…
Saliida lawska ma keto?
Jawaab: Maya. Saliida lawska ma aha keto. Waa dufan warshadaysan oo caafimaadkaaga wax u dhimi karta. Laakiin nasiib wanaag, waxaa jira door kale…
Ma acai keto?
Jawaab: Acai waa nooc ka mid ah berry oo inta badan laga beero Brazil. In kasta oo ay leeyihiin karbohaydraytyada, ku dhawaad ​​​​dhammaantood waa fiber si…
Keto Miyuu Isku Daray Kukiyada Dee Wanaagsan?
Jawaab: Isku-dhafka Kukiyada Dee ee Wanaagsan waxa uu leeyahay qaar ka mid ah karbohaydraytyada, laakiin waxaad u isticmaali kartaa si dhexdhexaad ah markaad ku jirto cuntada ketogenic ama qayb ka mid ah ...
Jiilaalka Keto ma yihiin cunto fudud oo jiis ah oo qallafsan?
Jawaab: Cheesies Crispy Cheese Snacks gabi ahaanba waa keto iyo karbohayre. Markaa waxaad ku raaxaysan kartaa iyaga oo aan wax dhibaato ah ku qabin cuntadaada ketogenic. The…
Adonis Orange & Turmeric Flavor Crunchy Brazil Nut Baars Keto ma yihiin?
Jawaab: Adonis Orange iyo Turmeric Flavored Crunchy Brazil Nut Baars ayaa ah beddelka karbohaydrayt hooseeya ee weyn ee keto dieter ...
Dhadhanka Qumbaha Adonis Ma Keto baa?
Jawaab: Adonis Qumbaha Crunchy Pecan Bars waxay leeyihiin kaliya 2g oo karbohaydrayt ah. Markaa tiro yar waxaad ku dari kartaa cuntadaada...
Ma Adonis Vanillia dhadhanka Qumbaha ee Bars Keto?
Jawaab: Adonis vanillia-dhadhan leh baararka qumbaha ee la shiiday waa cunto fudud oo karbohaydrayt yar-yar oo lagu cuni karo qadar yar oo ah cuntada keto-gaaga.
Aneto ma 100% maraq lo'da dabiiciga ah Keto?
Jawaab: Aneto 100% maraq Hilibka Dabiiciga ah waa maraq si buuxda loo kariyey oo ketogenic ah. Maraq lafaha waa saxan ay bulshada keto runtii jeceshahay. Waxay wax ku biiriyaan...
Waa maxay "kani waa keto" iyo sababta?
Ka dib markii aan dhammeeyey waxbarashada Nafaqeynta aadanaha iyo cuntada ee Jaamacadda Complutense ee Madrid ee 2014, Waxaan xiiseeyay mawduuca noocyada kala duwan ee cuntada aan caadiga ahayn. Si loo magacaabo si kastaba ha ahaatee. Laakin xiisaha aan u qabo cuntada keto Waxay bilaabatay agagaarka 2016. Sida marka aad wax ka bilowdo, waxaan haystay badda su'aalo. Markaa waxay noqotay inaan jawaabo raadiyo. Kuwaasi waxa ay ka yimaaddeen wax-yar-yar labadaba akhriska joogtada ah ee macluumaadka (daraasaadka sayniska, buugaagta gaarka ah, iwm.) iyo ku-dhaqanka laftiisa.
Muddo ka dib markii aan ku ilaalinayay ficil ahaan natiijooyin la yaab leh oo aniga ila muuqday, waxaan ogaaday in beddelka cuntooyinka qaarkood (gaar ahaan macaaneeyaha) ay ii horseedeen in aan helo cuntooyin aad u sarreeya oo lagu daro qaar ka mid ah iyo sidoo kale qayb adag oo ah alaabooyin cusub oo cusub. waxay bilaabeen inay u muuqdaan dadka bilaabay inay keenaan farxad cuntada keto. Suuqa ayaa si degdeg ah u socda. Laakiin markii aan bartay kuwan beddelka ah ama cuntooyinka gaarka ah, waxaan ogaaday in dhammaantood aysan ahayn keto sida la sheegay, ama waxaa jiray daraasado cilmi ah oo muujiyay in qaar ka mid ah ay tahay in la isticmaalo si dhexdhexaad ah.
Markaa waxaan go'aansaday inaan u ururiyo iyaga si aan shakhsi ahaan u isticmaalo. Markay xog-ururintayda korodhay, waxaan gartay inay run ahaantii sax tahay oo macluumaad faa'iido u leh dad badan. Oo habkan ayaa ku dhashay esketoesto.com. Iyadoo ujeedada kaliya ee aad haysato macluumaad wanaagsan oo aad awooddo raac cuntada keto si caafimaad leh oo waxtar leh.
Waa maxay cuntada ketogenic?
Cuntadani waxay asal ahaan ka timid 1920-meeyadii si ay u noqoto hab lagu daweeyo suuxdin carruurnimada, iyo sababtoo ah heerka guusha la yaabka leh: dadka cuna cunto keto inta u dhaxaysa 30% iyo 40% Suuxdin yar, ayaa ilaa hadda lagu isticmaalaa goobtan maanta.
Laakiin, ka waran isticmaalkeeda guud ahaan dadka caafimaadka qaba ee doonaya kaliya inay lumiyaan miisaan isku mid ah isla markaana hogaaminaya nolol caafimaad leh? Waxaan u falanqeyn doonaa kan aadka u hooseeya ee karbohaydraytyada iyo cuntada dufanka badan waxyar.
Cunnada ketodu aad bay ugu sarraysaa dufanka (qiyaastii 80% wadarta kalooriyadaada), karbohaydraytyadu aad bay ugu hooseeyaan (in ka yar 5% kaloriyadaada), iyo borotiin dhexdhexaad ah (badanaa 15-20% kaloriyadaada). Tani waa isbeddel aad u daran oo ka yimid qaybinta nafaqeeyayaalka guud ee lagu taliyay: 20% ilaa 35% borotiin, 45% ilaa 65% karbohaydraytyada, iyo 10% ilaa 35% baruur.
Qaybta ugu muhiimsan ee cuntada keto waa hab dabiici ah oo caadi ah oo loo yaqaan ketosis. Sida caadiga ah, jidhku si fiican ayuu ugu shaqeeyaa gulukoosta. Gulukoosku waxa uu soo baxaa marka jidhku jebiyo karbohaydraytyada. Waa hab fudud, waana sababta ay u tahay habka uu jidhku doorbido ee soo saarista tamarta.
Markaad iska jarto karbohaydraytyada ama aanad cunin wakhti dheer, jidhku wuxuu eegayaa ilo kale oo tamar ah si uu u buuxiyo farqiga. Dufanku caadi ahaan waa ishaas. Marka sonkorta dhiigu ay hoos uga dhacdo qaadashada karbohaydraytyada hoose, unugyadu waxay soo daayaan baruurta oo ay daadiyaan beerka. Beerka ayaa dufanka u beddela jidhka ketone, kaas oo loo isticmaalo ikhtiyaarka labaad ee tamarta.
Waa maxay faa'iidooyinka suurtagalka ah ee cuntada Keto?
Cunnada keto-ga waxa laga yaabaa inaanay fududayn, laakiin cilmi-baadhis cilmiyeedku waxay muujisay inay leedahay faa’iidooyin ka baxsan isticmaalkeeda daawaynta suuxdinta, maadaama cuntada keto ay u muuqato inay xidhiidh la leedahay hagaajinta daawaynta:
Alzheimer's: Saynisku wuxuu soo jeedinayaa in bukaannada Alzheimers ee raacaya cunnada ketogenic ay horumar weyn ku sameeyeen shaqada garashada. Tan waxaa la rumeysan yahay inay wax ku leedahay hagaajinta shaqada mitochondrial iyadoo siinaya maskaxda shidaal cusub.
Parkinson's: Mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee cudurka Parkinson waa ururinta aan caadiga ahayn ee borotiinka loo yaqaan alfa-synuclein. Cilmi-baadhis ay maalgelisay hay'adda Michael J. Fox Foundation ayaa sahamisay in cuntada ketogenic ay kiciso burburka borotiinnadan, taas oo yaraynaysa xaddiga alfa-synuclein ee maskaxda.
Cudurka sclerosis badan: Daraasad yar oo laga soo bilaabo 2016Bukaannada sclerosis badan (MS) waxay ku jireen cunto keto ah. Lix bilood ka dib, waxay soo sheegeen horumar xagga nolosha ah, iyo sidoo kale horumarinta caafimaadka jidhka iyo maskaxda. Laakiin dabcan, ka hor inta aan dhakhaatiirta iyo cilmi-baarayaashu helin xiriir ka dhexeeya keto iyo sclerosis badan, shaybaarro waaweyn iyo cilmi-baaris ballaaran ayaa loo baahan yahay. Hase yeeshee, natiijooyinka hordhaca ah waa kuwo xiiso leh.
Nooca sonkorowga 2: Cudurka noocaan ah, dabcan, hoos u dhigista karbohaydraytyada si ay ugu yareeyaan muujintooda waa caadada. Taas oo ka dhigtay bandhig aad u xiiso badan oo ku saabsan saameynta muddada dheer ee ku dheggan cuntada keto. Iyadoo cilmi-baaris ilaa hadda lagu sameeyay muunado aad u yar, caddayntu waxay soo jeedinaysaa in cuntada aadka u hooseeya ee karbohidratka (sida cuntada keto) ay caawin karto hoos u dhigista A1C iyo hagaajinta dareenka insulin ilaa 75%. Dhab ahaan, dib u eegis 2017 ah waxaa la ogaaday in cuntada keto ay la xiriirto xakameyn wanaagsan oo gulukoosta iyo hoos u dhigista isticmaalka daawada. Taasi waxay tidhi, qorayaashu waxay ka digeen in aysan caddayn haddii natiijooyinka ay sabab u tahay miisaan lumis, ama heerarka ketone ee sarreeya.
Kansarka: Cilmi-baaris hore oo tijaabo ah ayaa soo jeedinaysa in cuntada keto ay yeelan karto saameyn antitumor, malaha sababtoo ah waxay yaraynaysaa wadarta qaadashada kalooriga (iyo gulukooska wareega) ee koritaanka burada. In a 2014 dib u eegis Laga soo bilaabo cilmi-baarista xayawaanka, cuntada ketogenic ayaa la ogaaday inay si fiican u shaqeyso si loo yareeyo koritaanka burada, kansarka mindhicirka, kansarka caloosha y kansarka maskaxda. Baadhitaano badan oo biniaadmi ah ayaa loo baahan yahay oo muunado waaweyn lagu sameeyo, laakiin xaqiiqdii waa bar bilow aad u wanaagsan.
Noocyada cuntada keto
Sidii hore looga hadlay, waxaa jira kala duwanaansho ku jirta xaddiyada dufanka, borotiinka, iyo karbohaydrayt ee cuntada keto. Tani waxay keentaa noocyo kala duwan oo ah cuntooyinka keto ama siyaabo kala duwan oo wax looga qabto. Inta badan waxaa ka mid ah:
Cunnada caadiga ah ee keto-ga (DCE): Kani waa qaabka caadiga ah ee cuntada keto waxayna ku salaysan tahay dufan aad u sarreeya, isticmaalka borotiinka dhexdhexaadka ah. Waxay caadi ahaan ka kooban tahay: 75% baruur, 20% borotiin iyo 5% karbohaydrayt.
Cuntada keto ee borotiinka sare: Waxay la mid tahay cuntada caadiga ah, laakiin waxaa ku jira borotiin badan. 60% dufan, 35% borotiin iyo 5% carbohydrates.
Cunnada keto-ga meertada ah (DCC): Kani waa qorshe ku lug leh waqtiyo leh karbohaydraytyo badan oo la qaadanayo, tusaale ahaan, u qaybinta toddobaadka 5 maalmood oo isku xigta oo keto ah iyo 2 ee soo hadhay oo leh karbohaydraytyo.
Cunnada ketogenic ee la habeeyay (DCA): Waxay ku ogolaataa inaad ku darto karbohaydraytyada maalmaha aad aado tababarka.
Inkasta oo xaqiiqadu ay tahay in keto caadiga ah iyo cuntooyinka borotiinka sare ay leeyihiin daraasado ballaaran. Sidaa darteed, noocyada meertada ah iyo kuwa la isku habeeyey ayaa loo tixgeliyaa habab horumarsan oo ay isticmaalaan ciyaartoy badan.
Maqaalkan iyo guud ahaan shabakada, si loo fududeeyo la qabsiga, waxaan la shaqeynayaa DCE (cunto keto caadiga ah).
Runtii si dhakhso ah miyaan miisaan u dhimi karaa cuntada keto?
Waxaan ahaa ilmo buuran Waxaa hubaal ah in dhalinyaranimada aad miisaankaaga dhimi doonto marka aad kala baxdo, ayay igu yidhaahdeen. Natiijadu? Waxaan ahaa dhalinyaro buuran Tani waxay saamaysay dhinacyo badan oo noloshayda ah. Waxa aan bilaabay in aan is dhimo, aniga oo 17 jir ah. Tani waxay igu kaliftay inaan barto nafaqaynta bini'aadamka iyo cuntada. Sannadkii labaad ee shahaadadayda, waxaan horeyba u ahaa qof leh jir caadi ah oo caafimaad qaba. Waxayna tani runtii saamayn togan ku yeelatay noloshayda heer shakhsi iyo mid xirfadeed. Yaa rumaysan lahaa cunto yaqaanka buuran?
Markaa jawaabtu waa haa. Haddii aad miisaankaaga lumin karto cuntada keto. Ka hadli maayo wax mucjiso ah ama wax aan macno lahayn. Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in aad lumiso miisaankaaga iyo in ka badan, aad u lumiso si ka dhaqso badan marka loo eego cunto caadi ah oo leh heerar sare ama "caadiga ah"Carbohaydraytyadu waxay horeba qayb uga ahaayeen, waxayna yaraynaysaa halista cudurrada qaarkood.
Waxa intaa ka sii badan, waxa aad luminaysaa miisaanka adiga oo aan maalinta oo dhan ku bixin xisaabinta kalooriyooyinka ama aanad xakamayn buuxda ku hayn inta aad cunayso.
Daraasaduhu waxay muujinayaan in dadka raacda cuntada keto ay lumiyaan qiyaastii 2.2 ilaa 3 jeer miisaan ka badan kuwa si fudud u gooya kalooriyooyinka iyo baruurta. In kasta oo ay u ekaan karto mid ka soo horjeeda, triglycerides iyo HDL kolestaroolku waxay sidoo kale muujinayaan horumar.
Intaa waxaa dheer, cuntada keto, marka loo eego kororka isticmaalka borotiinka iyo hoos u dhaca sonkorta, waxay bixisaa faa'iidooyin kale (marka laga reebo miisaan lumis) sida dareenka insulinta oo la hagaajiyay.
Cuntooyinkee ayaan iska ilaalinayaa?
Asal ahaan kuwa leh heerar karbohaydrayt oo aad u sarreeya. Tusaale ahaan:
Cuntooyinka iyo cabitaannada fudud oo ay ku jiraan sonkor badan: Cabbitaannada fudud, casiirka, maraqa, nacnaca, jalaatada, iwm.
Badarka, daqiiqda iyo waxyaabaha laga soo saaro badankooda: baasto, bariiska, badarka, iwm.
Fruta: Dhammaan miraha marka laga reebo inta badan berry, sida strawberries, madowga madow, guava, plomme, miro beero, IWM
Digir ama digir: digir, digir, digir, digir, iwm.
Khudaarta xididka iyo tuberka: Baradhada macaan, dabacasaha, baradhada, iwm.
Cunto ama alaabooyinka dufanku ku yar yahay: aad uga taxaddar iyaga. Badanaa waa kuwo aad loo habeeyey oo aad bay hodan ugu yihiin karbohaydraytyada.
Suugo ama Suugo: Waa inaad sidoo kale ku eegtaa muraayad weyn. Maadaama qaar badan oo iyaga ka mid ahi ay leeyihiin qiyaaso sonkor ah oo aad u sarreeya iyo dufan buuxa.
Dufanka buuxa: Inkasta oo cuntada keto ay ku salaysan tahay qaadashada dufanka, waxaa lagama maarmaan ah in la xaddido dufanka aadka u caadiga ah ee saliidda la safeeyey, ama majones.
Khamriga: Waxa ku jira sonkorta runtii aad bay u sarraysaa. Markaa waxaa lagu talinayaa in gabi ahaanba laga takhaluso cuntada keto.
Cuntooyinka aan sonkor lahayn: Halkan sidoo kale, waa inaad aad uga taxadirtaa. Maaddaama dhammaan macmacaanayaashu aysan ku habboonayn cuntada keto. Sidaas darteed halkan waxaan ku falanqeeyay macaanayaasha ugu badan. Oggolaanshaha inaad ogaato kuwa aad cuni karto adigoon ka bixin cuntada.
Cuntooyinkee ayaad ku cuni kartaa Cuntada Keto?
Cunto keto waxay inta badan ka kooban tahay:
Hilibka: Casaan, Isteek, Serrano ham, hilib doofaar, turki, digaag, hilib hamburger, iwm.
Kalluunka dufanka leh: Salmon, tuna, tufaax, mackerel, iwm.
Cheeses: Ugu horreyntii lama farsameeyo sida cheddar, mozzarella, farmaajo ari, buluug.
Miraha iyo nooca iniinaha: Almonds, walnuts nooc kasta ah, iniin bocorka, iniinaha chia, iwm.
Saliida aan la farsamayn: Saytuun bikro ah, qumbaha iyo saliidda avokado.
Avocado: Mid dhan ama guacamole oo laftaadu samaysay. Haddii aad iibsatid, waa inaad hubisaa inaysan jirin wax lagu daray.
Khudaarta cagaaran ee u janjeerta inay ka kooban yihiin karbohaydrayt yar iyo sidoo kale yaanyada, basasha iyo basbaaska, iwm.
Xawaashyada caadiga ah: milix, basbaas, geedo yaryar, iwm.
Cunista dibadda adiga oo aan ka boodin cuntada keto
Si ka duwan noocyada kale ee cuntada, cuntada keto, cuntooyinka guriga ka baxsan maaha kuwo adag. Dhab ahaantii dhammaan makhaayadaha waxaad ku raaxaysan kartaa ikhtiyaarada keto-saaxiibtinimo oo dhan sida hilibka iyo kalluunka. Waxaad dalban kartaa ribeye wanaagsan ama kalluunka dufanka badan sida salmon. Haddii hilibka ay la socdaan baradho, waxaad codsan kartaa in kuwan lagu beddelo khudaar yar oo aan dhib lahayn.
Cuntooyinka leh ukunta sidoo kale waa xal wanaagsan sida omelet ama ukunta hilib doofaar leh.
Cunto kale oo aad u fudud ayaa noqon doonta hamburgers. Kaliya waa inaad ka saartaa rootiga oo waxaad hagaajin kartaa adigoo ku daraya avokado dheeraad ah, jiis hilib doofaar ah iyo ukun.
Makhaayadaha caadiga ah sida Mexican-ka sidoo kale wax dhib ah kulama kulmi doontid. Waxaad dalban kartaa hilib kasta oo ku dar qadar wanaagsan oo farmaajo ah, guacamole, iyo salsa ama labeen dhanaan.
Marka la eego waxa ay noqon karto in lagu cabbo baar asxaabta qaarkood, adiguna dhib kuma yeelan doontid. A kookaha 0ama Cunto Coke iyo sidoo kale wax kasta oo kale oo soodhaha ama nestea ah oo aan sonkor lahayn waa keto. Waxaad sidoo kale cabbi kartaa kafeega dhib la'aan.
Waxaas oo dhan, waxaad arki kartaa in wax-soo-saarku aanu ahayn mid aad u muuqda sida cuntooyinka kale. Uma baahnid inaad dareento dembi markaad dibadda wax ka cunto, sababtoo ah waxay leedahay ammaan buuxa, waxaad ka heli kartaa doorashooyin aad ku raaxaysato cuntadaada keto.
Dhibaatooyinka ay keento cuntada keto iyo waxa la sameeyo si loo yareeyo
Sida cuntooyinka badankooda, waxaa laga yaabaa inaad dareento saameynaha qaarkood goor hore markaad bilowdo cuntada keto. Tani waa wax iska caadi ah. Jidhkaaga waxa loo caadaystay in uu si gaar ah u shaqeeyo oo aad bedesho. Waa inaadan ka baqin. Cunnada keto gabi ahaanba waa badbaado dadka caafimaadkoodu wanaagsan yahay.
Qaar waxay u yaqaanaan dhibaatooyinkan: hargabka keto.
Kan loo yaqaan hargabka keto wuxuu badanaa keenaa hoos u dhaca heerarka tamarta, dareenka fekerka ee caddayn yar, gaajada korodhka, xanaaqa dheefshiidka iyo hoos u dhaca waxqabadka ciyaaraha. Sida aad u jeeddo, Hargabka keto aad ugama duwana dareenka aad la kulanto marka aad bilowdo cunto kasta. Waxyeelladan soo raaca waxay socotaa dhowr maalmood ugu dambeyntiina way baaba'aan.
Si loo yareeyo saamaynta kuwan, fikrad xiiso leh waa in la ilaaliyo cunto caadiga ah toddobaadka ugu horreeya laakiin hoos u dhigista mugga karbohaydraytyada si weyn. Sidan, jidhkaagu wuxuu si tartiib tartiib ah ula qabsan karaa dufanka gubanaya ka hor inta uusan gabi ahaanba ka tagin qaadashada karbohaydrayt.
Cunto keto ah ayaa sidoo kale si weyn u beddesha biyaha iyo macdanta jidhkaaga. Markaa waxaad cuntadaada ku dari kartaa xoogaa milix ah ama waxaad qaadan kartaa macdan dheeraad ah haddii aad rabto. Qaadashada 3.000 ilaa 4.000 mg oo sodium ah, 1.000 mg oo potassium ah iyo 300 mg oo magnesium ah maalintii waxay si weyn u yaraynaysaa waxyeelada soo raaca inta lagu jiro xilliga la qabsiga.
Waa muhiim, gaar ahaan bilowga, inaad wax cuntid ilaa aad ka dareento dhereg buuxa. Ma laha xaddidaad kaloori. Cunnada keto waxay keentaa miisaan lumis iyada oo aan la xakameynin kalooriyo ula kac ah ama xaddidid. Laakin haddii aad rabto in aad xakameyso si ay u yeeshaan saameyn degdeg ah, ugu yaraan isku day in aadan marka hore gaajoon. Taasi waxay kaa caawin doontaa inaad si hufan u ilaaliso.
Cunto ketogenic ma ii tahay fikrad wanaagsan?
Sida dhammaan cuntooyinka, waxaa jira dad aan cuntada keto ku habboonayn doonin. Cuntada ketogenic aad bay ugu fiican tahay dadka cayilan, macaanka qaba ama raba inay hagaajiyaan caafimaadkooda dheef-shiid kiimikaad iyo guud ahaan. Laakiin aad uguma habboona ciyaartoyda ama dadka doonaya inay helaan muruq ama miisaan badan.
Ka sokow, sida cunto kasta, way shaqayn doontaa haddii aad si dhab ah u qaadato oo aad joogto. Natiijadu waxay noqon doontaa mid dhexdhexaad ah - muddo dheer. Inaad cunto cunto waa tartan fog. Waa inaad si fudud u qaadataa. Ka fakar taas hubaal, in aad muddo dheer ka maqnayd miisaankaagii saxda ahaa. Macno ma samaynayso (sidoo kale caafimaad ma leh) in aad rabto in aad ku lumiso waxaas oo dhan 15 maalmood gudahood.
Si kastaba ha ahaatee, iyo marka dhammaan kuwan kor ku xusan la tixgeliyo, waxyaabo yar ayaa lagu caddeeyey nafaqada sida waxtarka marka ay timaado miisaanka luminta iyo faa'iidooyinka caafimaad ee la socda cuntada keto.
Waxaan ku talinayay cunto this sanado badan. Iyo sida wax walba, waxaa jira shakiyo baahsan labadaba horraantii iyo inta lagu jiro horumarinta kuwaas oo aan isku dayi doono inaan nadiifiyo.
Miyaan luminayaa muruqa?
Sida dhammaan cuntooyinka, hoos u dhaca murqaha ayaa suurtagal ah. Laakiin marka la eego in mugga qaadashada borotiinka uu ka weyn yahay cuntooyinka caadiga ah, iyo in uu jiro heer sare oo ketone ah, luminta suurtogalka ah ayaa aad uga hooseeya oo xitaa ma noqon doonto mid muhiim ah samaynta miisaannada qaarkood.
Ma ka shaqayn karaa murqahayga cunto keto ah?
Haa, laakiin haddii ujeedadaadu tahay inaad hesho mugga, cuntada keto ayaa tan waxtar u leh marka loo eego cunto karbohaydrayt dhexdhexaad ah.
Ma awoodi karaa inaan mar kale cuno karbohaydraytyada?
Dabcan. Laakiin aad bay muhiim u tahay inaad si weyn u jarto karbohaydraytyada. Runtii waa saldhigga cuntada waana inaad haysataa ugu yaraan qaadashada iyaga ugu yaraan 2 ama 3 bilood ee ugu horreeya. Muddadaas ka dib, waxaad cuni kartaa karbohaydraytyada waqtiyo gaar ah, laakiin isla markiiba ka dib waa inaad ku noqotaa heerarka ugu hooseeya.
Intee in le'eg oo borotiin ah ayaan cuni karaa?
Barootiinnada waa in lagu cunaa xaddi dhexdhexaad ah. Qaadashada sare waxay keeni kartaa insuliinka sare u kaco waxayna hoos u dhigtaa ketones-ka. Xadka ugu badan ee lagu taliyey waa 35% wadarta kalooriyada.
Waxaan si joogto ah u dareemaa daal ama daal
Hubaal, waxaad u cunaysaa hab khaldan ama waxaa laga yaabaa in jidhkaagu aanu u isticmaalin dufanka iyo ketones si sax ah. Hoos u dhig qaadashada karbohaydrayt oo sii wad talada aan hore u bixiyay. Waxa kale oo aad qaadan kartaa kabitaannada TMC ama ketones si ay u caawiyaan jidhkaaga.
Ma runbaa in ketosis uu aad khatar u yahay?
Haba yaraatee. Waxaa jira dad ku qalda fikradda ketosis iyo fikradda ketoacidosis. Ketosis waa geedi socod dabiici ah oo jirka ku jira, halka ketoacidosis ay u muuqato kiisaska sonkorowga oo aan gebi ahaanba la xakameynin.
Ketoacidosis waa khatar, laakiin ketosis oo dhacda inta lagu jiro cuntada ketogenic waa caadi oo gebi ahaanba caafimaad qabta.
Maxaan sameeyaa haddii aan leeyahay dheefshiid culus iyo / ama calool-fadhi?
Waxyeelladan soo raaca waxay soo bixi kartaa 3 ama 4 toddobaad ka dib. Haddii ay sii socoto, isku day in aad cunto khudradda faybarku ku badan yahay. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa supplements magnesium si aad u yareyso calool-istaagga.
Kaadidaydu waxay leedahay ur miro leh
Ha ka welwelin. Tani waxay si fudud u sabab u tahay baabi'inta alaabada la soo saaro inta lagu jiro ketosis.
Maxaan samayn karaa haddii aan ur xun leeyahay?
Isku day inaad cabto biyo badan oo dhadhan dabiici ah ama calaliso xanjo aan sonkor lahayn.
Miyaan u baahanahay inaan mar mar buuxiyo karbohaydraytyada?
Looma baahna, laakiin waxay faa'iido u yeelan kartaa in lagu daro maalinta qaar kalooriyo ka badan inta caadiga ah.
Cuntooyinka Macmacaanka Keto ee ugu dambeeyay
Cunto karinta Keto Halloween Frosted Kukiyada
Sida Loo Sameeyo Cunto Keto Macro Qorsheeyaha Cunto
Cunnooyinka Keto ee ugu dambeeyay
Ketogenic, Carb Low, Sonkor-La'aan iyo Cunto Kukiyada "sonkorta" ee Bilaashka ah
Jilibka buskudka ee Keto iyo kareemka shukulaatada oo la kariyey
Cuntada liin macaan ee Keto
Keto iyo Keega Bilaashka ah ee Sonkorta Cuntada la kariyey
Cuntada keto ee cajiinka buskudka
Cuntada fudud ee Keto Squash Bars Recipe
Ogeysiiska Sharci iyo Siyaasadda Qarsoonnimada
© Copyright 2022 Kani ma keto baa? All rights reserved
Mulkiilaha boggan, esketoesto.com, waxa uu ka qayb qaataa Amazon EU Affiliate Program, oo waxa uu galaa iibsi xidhiidhsan. Taasi waa, haddii aad go'aansato inaad ka iibsato shay kasta oo Amazon ah iyada oo loo marayo isku xirkayada, wax lacag ah kuguma kacayso laakiin Amazon waxay na siin doontaa guddi naga caawin doona maalgelinta shabakadda. Dhammaan xiriirada wax iibsiga ee ku jira mareegahan, kuwaas oo adeegsada/iibsada/qaybta, ayaa lagu hagayaa degelka Amazon.com. Astaanta Amazon iyo astaanta waa hantida Amazon iyo la-hawlgalayaasheeda.